Realme C20 bụ ekwentị ọhụrụ dị ala na batrị 5.000 mAh | Gam akporosis
Realme C20 bụ ekwentị ọhụrụ dị ala na batrị 5.000 mAh
Realme gosipụtara ekwentị ọhụrụ dị ala maka ndị ọrụ nwere profaịlụ dị ala na ndị chọrọ nnwere onwe ụbọchị niile. Na Gbanwee C20 Ọ bụ ama na-apụta ìhè n'ụzọ dị na batrị ya ma bido ya na Vietnam.
Realme C20 na-akwado nhazi nke usoro C usoro, ihe dị mkpa bụ na e mere ya maka ndị chọrọ ngwaọrụ dabere na iji ngwa, oku na obere ihe ọzọ. Ihe dị mma bụ na a na-emelite ya ruo Disemba ma ọ maghị ma ọ ga-emelite na nke iri na otu nke gam akporo.
1 Realme C20, mpaghara dị ala na nnwere onwe nke ihe karịrị otu ụbọchị
2 Batrị ụbọchị niile
Realme C20, mpaghara dị ala na nnwere onwe nke ihe karịrị otu ụbọchị
El Gbanwee C20 Ọ bụ ekwentị gbadoro ụkwụ maka ahịa nke onye ọrụ anaghị achọ ike dị ukwuu ma ha na-achọ ọdụ akụ na ụba, nke a na-eme na Vietnam. Ogwe nke ihe nlereanya a bụ 6,5 sentimita asatọ na mkpebi HD +, bezels ahụ nwere ihe dịka 16%, na-ahapụ 84% fọdụrụ iji gosipụta nkọwa niile nke ngwa ahụ.
MediaTek Helio G35 processor etinyegoro ya nke ga-ebugharị ya yana ihe mgbawa ike PowerVR GE8320, 2GB RAM na 32GB nchekwa. Ihe dị mma bụ na enwere ike ịgbasa ngalaba ikpeazụ na kaadị MicroSD nke ruru 256 GB nke a ga-azụrịrị iche.
O nwere igwefoto abuo, otu azụ na otu ihu, azụ bụ 8 megapixels nke dị ezigbo mkpa iji were onyonyo na vidiyo. Ihu n’iru n’iru na 5 megapixels, odi nma maka iweta ezigbo foto na ideko vidio, maka inwe nzuko vidiyo.
Batrị ụbọchị niile
Onye nrụpụta Realme na-ejide n'aka na nnwere onwe nke ikike ọ bụla dị ihe dị ka awa 30 na ojiji nkịtị, yabụ ọ bụ ebe ọ ga-apụta karịa ndị ọzọ nkọwa ya. Batrị ahụ bụ 5.000 mAh na arụmọrụ bụ nnọọ ịrịba ama-abịa na oru oma processor.
Ihe a ga-akwụ ya bụ Micro USB na ọsọ nke 10W, ọ ga-ewe ihe karịrị otu elekere iji kwụọ ụgwọ na nke ziri ezi bụ na ị ga-enwe nnwere onwe maka ihe karịrị otu ụbọchị. Ezubere Realme C20 iji rụọ ọrụ ụbọchị niile n'ụlọ na-enweghị na-ata ahụhụ na ị na-anọ na-enweghị batrị.
Realme C20 batara na njikọta zuru oke, mgbe ị bịarutere Helio G35 CPU anyị ga-enwe modem 4G / LTE, ewezuga na ọ bịara na Bluetooth 5.1, Wi-Fi ac na ọdụ ụgbọ mmiri MiniJack. Micro USB ọdụ ụgbọ mmiri bụ maka ịchaji batrị, ọ gafere 10W ma ọ bara uru ịhụ na ọnụahịa ya bara uru.
Akụrụngwa ọ na-abịa bụ gam akporo 10 dị ka sistemụ arụmọrụ, maka oge ụlọ ọrụ ahụ ekwughi na ọ ga-emelite na nsụgharị nke usoro ahụ. Ihe dị mma bụ na emelitere ya ruo Disemba ma kwe nkwa mmelite dị mkpa nke XNUMX nke gam akporo.
AHR C C20
Nhazi MediaTek Helio G35
Nchekwa n'ime 32 GB / Gbasaa site na kaadị MicroSD ruo 256 GB
Gbanwee CAMERA 8 MP
Njikọ 4G / LTE / Wi-Fi ac / Bluetooth 5.1 / Micro USB / MiniJack
El A mara ọkwa Realme C20 maka Vietnam, N'oge a amabeghị ma ọ ga-erute mba ndị ọzọ dịka e mere ya maka mba akọwapụtara nke ọma na-achọ mkpanaka ọnụ ọnụ. Ọnụ ego Realme C20 bụ VND2,490,001 (ihe dị ka euro 90 iji gbanwee) wee bịa na agba ojii na acha anụnụ anụnụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Realme C20 bụ ekwentị ọhụrụ dị ala na batrị 5.000 mAh
Google Duo na Ozi ga-akwụsị ịrụ ọrụ na ekwentị mkpanaaka ndị a na-akwadoghị
Etu esi emezi ọnọdụ gbara ọchịchịrị na gam akporo 11